Gorfeynta Buugga “Masraxa Cadaabta “, ee uu qorey Cabdinaasir Axmed Ibraahim |
Gorfeynta Buugga “Masraxa Cadaabta “, ee uu qorey Cabdinaasir Axmed Ibraahim
Qoraha buuggani hore iyo dambeysaba innalama uu wadaagin in sheekooyinkani yihiin khayaal uu maskaxdiisa ka curiyey iyo iney yihiin dhacdooyin dhab ah oo isaga ku dhacey. Midkey doontaba ha ahaatee, waxa hubanti ah in ay gef weyn ku tahay xeerarka ay ku dhisan tahay sheeko faneeddu in afkaarta qoraha sheekada oo mutaxan si badheedh ah loogu dhex arko. Taasi oo sheekadii ka dhigeysa ama u rogeys maqaal dhacdo laga qoray. Maxaa magaca qoraha meeshan keeney? Inuu buuggan qorey yuu]
u sheegayaa? Sheekadu wakhtiga ay dhacdey iyo buuggani aminta uu soo baxay maxaa iska galay? Ma sheekaa, ma ………….?